Panolia eldi Gray, 1850
ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်နှင့် ဟိုင်နန်ကျွန်းတို့၌ တွေ့ရှိရသော သမင်မျိုးစိတ်ကွဲများမှာ Cervus eldi siamensis ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၁၀ ကောင်မှ အကောင် ၃၀ အထိသာ ရှိနိုင်တော့ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပြီး မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အဆင့် စီမံကိန်းများချမှတ်၍ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ လာအိုနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံများတွင် ကောင်ရေအလွန်နည်းပါးနေပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်မူ မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး ဖြစ်နေသည်။ တရုတ်ပြည်၊ ဟိုင်နန်ကျွန်းတွင်မူ သမင်ကောင်ရေ ရာဂဏန်း အနည်းငယ်ခန့်ကို ခြံလှောင်၍ မွေး မြူ ထားသည်။
↑ Gray, T.N.E. (2015). "Rucervus eldii". IUCN Red List of Threatened Species 2015. IUCN.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရွှေသမင်&oldid=718637" မှ ရယူရန်